Taliyihii Asluubta DF oo la xukumay. - Wargeyska Faafiye
Home 2012 December 10 .Warka Taliyihii Asluubta DF oo la xukumay.
Taliyihii Asluubta DF oo la xukumay.
Maxkamada Darajada 1-aad ee Ciidamada DF ayaa Maanta [Dec 08,2012 ] Xukun xabsi daa’in ah ku riday Taliyihii Ciidamada Asluubta Somalia Gen. Cabdi Maxamed Ismaaciil kadib markii lagu eedeeyay inuu xabsiga dhexe kasii daayay Maxaabiis ka tarsan Al-shabaab.
Taliyaha la xukumay ayaan ku sugnayn Maxkamada waxaana hay’adaha amaanka lagu xukumay inay soo qabtaan taliyaha, iyadoo sidoo kale xukun 5-sano oo xabsi ah lagu riday Xasan Axmed Liibiya oo ahaa agaasimaha maxkamadda ciidamada Qalabka sida oo isagana lagu eedeeyya inuu taliyaha gacan ku siiyay dambiga uu galay.
Gudoomiyaha Maxamada Darajada 1-aad ee Ciidamada DF Col. Liibaan Yaroow oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Taiyaha Ciidamada Asluubta lagu helay dambi lagu soo eedeeyay oo ahaa inuu 14 dagaalyahan oo Al-shabaab ka tirsan uu kasii daayay Xabsiga Muqdisho.
“Maxkamadu waxay go’aansatay inay ku rido Taliyihii Asluubta Xabsi Daa’in, sidoo kalena aanu qaban karin darjo ciidan, waxaana laga qaaday darajadii ciidamada uu ku lahaa” ayuu yiri Col. Yaroow oo warbaahinta la hadlay xukunka kadib.
Sidoo kale Xasan Liibiya ayaa isagana la sheegay in lagu helay dambigii loo haystay, iyadoo maxakmadu ay sidoo kale amar ku bixisay in mid ka mid ah xubnihii Al-shabaab oo lagu magacaabo Muuse Ciise Nuur uu xabsigiisa oo ahaa 8-sano sii wato, iyadoo la sheegay in taliyaha la xukumay uu doonayay inuu sii daayo.
Xukunkan ayaa noqonayaa kii ugu horeeyay oo ay Maxkamada Ciidamadu ku rido Eedeysanayaal uu ku jiro Sarkaal sare oo Ciidamada DF ka tirsan, iyadoo dhowr jeer oo hore la sheegay in xabsiga dhexe laga waayay dad sanado badan lagu xukumay.
Maxkamada Ciidamada DF oo la sameeyay sanadkii hore ayaa waxay xukuno kala duwan ku riday xubno ka tirsan Al-shabaab iyo Ciidamo kuwa DF ka tirsan kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan u geystay dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
Dowlada Kenya oo Dugsi Quraan xirtay
M/Faroole oo xildhibaanada cusub ka hadlay
Dadkii ku dhaawacmay qaraxii Tiyaatarka oo gargaar la siinayo
Turkish Airlines to fly to Mogadishu